Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana hoe "The Motorist". Ny tantaran-tantaranay Nelson Semedo momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoana nahaterahany hatramin'izao. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana sns.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizan'izy ireo haingana amin'ny lafiny iray, antony iray ho an'ny anaram-bosony "The Motorist". Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Nelson Semedo izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Voalohandohan'ny fiainana
Nélson Cabral Semedo dia teraka tamin'ny andro 16 tamin'ny 1993 ny volana novambra tamin'ny ray aman-dreniny tany Lisbon, Portugal. Raha miresaka momba ny niandohany, dia i Semedo no fitambaran'ny lova Portiogey sy Cape Verdean. Izany dia manazava ny antony mahatonga ny mpilalao energetic ho akaiky ny mpiray firenena aminy Cristiano Ronaldo izay manana ny karetin'i Cape Verdean ihany koa.
Nelson Semedo dia nihalehibe niaraka tamin'ny reniny malalany, raim-pianakaviana iray tsy fantatra ary rahalahy iray tany amin'ny tanànan'i Mira-Sintra. Ny reniny nosoritana etsy ambany dia nanangana azy tany amin'ny tranon'ny Katolika iray.
Ny renin'i Nelson Semedo. Bola amin'ny Instagram
Nelson hatramin'ny fahatanorany noho ny fahatsiarovany tsara ny fotoana laniny amin'ny zokiny lahy izay naniry ny hanaraka ny lalan'ny fandavana baolina kitra sy ny fanabeazana ho any amin'ny kolejy.
Mira-Sintra, tanàn-dehibe Nelson Semedo dia toerana mahafinaritra, tanàna kely misy fianakaviana sy PlayStation mahatsikaiky. Ho an'i Nelson, dia momba ny lalao filalaovana lalao baolina kitra FIFA izay nilalao ho an'ny fialamboliny. Taloha talohan'ny naha-zatovo azy, Nelson dia niady hevitra tamin'ny ekipan'ny FC Barcelone FIFA tsy fantany ny hoaviny any aoriana any.
Fahatsiarovana an'i Nelson Semedo tamin'ny FIFA (Credit to Namben / COD, Retos y Guias!)
Araka ny tranonkalan'ny FC Barcelone, dia te-hifidy an'i FC Barcelone amin'ny FIFA i Semedo raha milalao lalao video miaraka amin'ireo namany, satria efa hatramin'ny ela, talohan'ny fandrosoana an'i Messi, dia nieritreritra foana "Izy ireo no ekipa tsara indrindra eran'izao tontolo izao."
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Asa fanorenana
Ny antony nampiasana FC Barca tao amin'ny PlayStation FIFA Gaming Series dia noho ny anarana iray "Ronaldinho". Ilay mpilalao baolina kitra izay mpilalao taloha tao FC Barcelona dia nanapaka ny pejy voalohany amin'ny andian-dahatsary FIFA 2007 PlayStation 2.
Nelson Semedo- An-tsokosoko taloha - (Credit to GameSpot)
Ankoatra ny fanandevozana PlayStation, Nelson koa dia nanolo-tena ho an'ny T-shirt T-shirt FC Barcelona toy ny tamin'ny fotoana nanapahany hevitra ny handeha hilalao Street Football miaraka amin'ny namana eny an-toerana. Tamin'izany fotoana izany, dia tamin'ny baolina an-dalambe no nahitana azy rehetra.
Tsy mbola nitendry ekipa ofisialy mihitsy aho. Niezaka mafy aho tamin'ny mbola tanora nefa tsy nahavita izany. Nanomboka nilalao teny an-dalambe aho. hoy i Nelson Semedo.
Na dia fantatry ny ankamaroan'ny mpilalao baolina fanta-daza ankehitriny aza dia niasa tamina tanora mbola kely izy, dia nanjary hafa ny Nelson Semedo. Nanohy nilalao baolina an-dalamby izy mandra-pahatongan'ny 15, taona izay nahita ny mpiasan'ny klioban'ny Sintrense ary nahaliana azy ny fahaizany.
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Talohan'ny nanandramany fitsapana tao Sintrense, klioba iray manana fari-pitsipika mahatalanjona, dia efa nolazaina aloha i Semedo fa kely loatra ilay izy. Rehefa jerena ny fomba nanarahan'ny tanora hafa azy, dia afaka nanaporofo izy fa tsy misy sakana izany raha tsy misy ny ezaka sy ny fampiharana.
Ny fientanan'i Semedo ho an'ny baolina kitra tao amin'ny 2008 dia nahita azy nandalo ny fitsapana ary nisoratra anarana tao amin'ny lisitry ny ekipa tanora ao an-toerana Sintrense, faritra iray eo anelanelan'ny fizarana faha-3 ao Portiogaly tamin'izany fotoana izany.
Nelson Semedo tao Sintrense. Credit to Sintra Notícias.
Ny fitantanana ekipan'ny Sintrense dia nanome an'i Nelson Semedo ho tontolo tsy misy fiatraikany izay nila nandroso. Nelson Semedo nanomboka nilalao toy ny faritra afovoany izay tia tia milalao sy manatratra tanjona.
Ny fandrosoana voalohany nataon'i Semedo dia nirehitra moramora tamin'ny faharetana fa ny akanjony tsara indrindra. Ny faharetana sy ny fahavononana tao anatin'ny taona 3 dia nahita azy nipoitra tampoka teo ambonin'ny laharana baolina kitra baolina kitra ary nahazo fampiroboroboana tao amin'ny ekipa zokiny indrindra. Tamin'io fotoana io, dia noraisin'ny klioba portio Portogey izy, ka i Benfica no nandray ny tolotr'izy ireo.
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Road to Fame
Nelson Semedo nasaina nilalao niaraka tamin'i Benfica B taorian'ny fidirana tao amin'ny klioba. Indraindray dia nanomana ny handao an'i Benfica B ho an'ny ekipa kely izy satria tsy nahazo ny fahafahana hilalao miditra. Mpanazatra taloha an'i Semedo izany O Jogo izay voatery nandresy lahatra an'i Semedo hilalao.
"Nahavita nandresy lahatra azy aho mba hijanona miaraka amin'i Benfica ary ho toy ny lala-mahitsy. Niresaka taminy aho ary nampahafantariny azy ny fahafahana nananany. Ankehitriny dia nahazo valisoa izy noho ny ezaka nataony. hoy i Jogo.
Taorian'ny fiafaran'ny asa-tànan'i Benfica B, dia nindramin'i Semedo an'i Centro Desportivo de Fátima. Voamarika fa nihamitombo haingana izy rehefa niverina taorian'ny lalao 29.
Niaraka tamin'ny ekipa senioran'ny Benfica, dia naverin'i Semedo ny toerana voalohany nipetrahany ary lasa mpilalao fahaefatra faran'izay nampiasaina tao amin'ny lohatenin'ny ligy fahaefatra latsaky ny andiany. Nanampy ny ekipany koa i Nelson Semedo mba handresy an'i Taça de Portugal, Taca de Liga ary lohatenin'ny liga Premier.
Ny làlana nodiavin'i Nelson Semedo hitantara tantara (Credit to Instagram)
Ny fampisehoana nataon'i Nelson Semedo nandritra ny vanim-potoanan'ny 2016-2017 dia nahatonga azy ho lasa mpilalao baolina amin'ny taona 2017.
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Indraindray, misy fiantraikany vintana eo amin'ny baolina kitra. Nelson Semedo dia mety tsy ho ny tsara indrindra amin'izao fotoana izao manerantany izay maniry ny hilalao an'i FC Barcelone. Fa ny fanapahan-keviny sy ny faniriany tamin'ny fahazazany dia nandoa ny andro 13th of July 2017 fony FC Barcelona nanambara ny sonia niaraka tamin'ny klioba.
Ny andro Nelson Semedo no nanao sonia ny FC Barcelone. (Credit to DailyStar)
Fantatrao ve?... Andre Gomes dia nanamafy ny fahaizan'i Semedo hanao fitifirana ao amin'ny Camp Nou. Izy koa dia nanampy tamin'ny fanampiana ny tanindrazan'ny firenena hafa.
Andre Gomes sy Nelson Semedo. Bola ho an'ny World of Sports.
"Niresaka tamin'i Andre aho mikasika ny halehiben'ny klioba, ny rivotra tsara ao amin'ny efitrano fisakafoana ary ny tena izy dia toy ny fianakaviana" Navoakan'i Semedo tamin'ny sonia. "Tena tiako ny zavatra nolazainy tamiko ary tsara vintana aho mba hahita azy miaraka aminy."
Nelson Semedo dia ny Portogey 12th mba hamadika ny faritra Catalan, manaraka ny anarana toy ny Figo, Deco ary Vitor Baia. Nandritra ny asany mahatalanjona dia nomena ny LPFP Primeira Liga Mpilalao ny taona (2016-17) ary teo anivon'ny UEFA Champions League Breakthrough XI (2017).
Raha ny marina, tsy dia nieritreritra i Nelson Semedo fa taona vitsivitsy lasa izay dia ho tonga any Barça ny 15 taona mpilalao baolina an-dalambe taloha tahaka azy. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Relationship Life
Ny naman'i Nelson Semedo iray izay manalavitra ny mason'ny daholobe tsotra fotsiny satria ny fiainam-pitiavany dia maimaimpoana maimaim-poana. Tao ambadiky ny mpilalao baolina kitra Portiogey, misy WAG mahavariana ao amin'ny olona mahafinaritra an'i Marlene Alvarenga.
Nelson Semedo sy Marlene Alvarenga (Credit to Instagram)
Raha tokony handehanana vehivavy vavy fotsy ho an'ny ankamaroan'ny mpilalao baolina mainty hoditra i Nelson Semedo dia aleony mametraka olona avy amin'ny fianakaviany. Marlene tsy misy fisalasalana, tsara tarehy fanampiny ho an'ireo vehivavy tsara tarehy ao WAGs FC Barcelona. Manohana tanteraka ny lehilahiny izy amin'ny alàlan'ny lahatsoratra avy amin'ny kaonty Instagram manokana.
Marlene Alvarenga: Fanampiana mahafinaritra ny WAGs FC Barcelone. Credit to OppaSportsBet.
Nelson Semedo dia sambatra am-panambadiana amin'i Marlene Alvarenga. Amin'izao fotoana izao, samy tia ny zaza roa antsoina hoe Luana Pereira Semedo izay teraka tamin'ny 9th of May 2016.
Ny fianakavian'i Nelson Semedo. Credit to Instagram
Ireo mpivady dia mampiseho ny fisehoana ampahibemaso ary matetika mivezivezy any amin'ny toerana mahafinaritra mandritra ny vakansy amin'ny baolina kitra
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Fiainana manokana
Ny fiainam-pianakaviana Nelson Semedo. Bola amin'ny Instagram
Ny fahazoana mahafantatra an'i Nelson Semedo Personal Life dia hanampy anao hahazo sary feno momba azy. Indray andro izy dia nanambara ny tenany ho lehilahy mangina sy mahazatra izay manome lanjany lehibe tsy ho an'ny fianakaviany sy ny namany ihany.
"Ho ahy dia tena manan-danja tokoa izy ireo, mifampiresaka amin'ny namana sy ny fianakaviana, eny fa na dia ao an-trano aza izy, dia izay tiako," Niaiky i Semedo indray mandeha
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Lifestyle
Nelson Semedo dia mpilalao baolina kitra izay toa manana izany rehetra izany. Nahazo ny vola, trano tsara tarehy sy fiara mirehitra izy noho ny karamany mahatalanjona ho mpilalao baolina.
Ny LifeStyle an'i Nelson Semedo. Credit to SoccerInformania
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Fianakaviana
Semedo dia toa olona iray izay mifandray lalina amin'ny fianakaviany sy ny fakany Cap Vert. Tsy firenena firenena toa an'i Portiogaly i Cape Verde.
Ny firenena dia tsy milalao namana noho ny fandaniana. Nandritra ny taona maro dia nisy ny fifindra-monin'ireo mpilalao avy amin'ny ekipa nasionalin'i Cape Verdean. Iray amin'ireo mpilalao baolina kitra toy izany i Manchester United mpilalao Nani izay teraka tany Praia (renivohitr'i Cape Verde) saingy nisafidy ny hisolo tena an'i Portiogaly. Ireo mpilalao baolina kanto hafa manana ny loharano ao Cape Verde dia ahitana; Patrick Viera sy Henrik Larsson.
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold- Untold Facts
Fantatrao ve?… Raha vao nanao sonia ny FC Barcelone i Semedo, dia nandray anjara tamin'ny ady tamin'i Neymar nandritra ny fotoam-pampianarana nandritra ny fitsidihany an'i Etazonia. Nisy zava-nitranga iray nalaina sary an-tsary. Credit to DailyMail.
Nalain'i Nelson Semedo 5 volana ny resadresaka momba ilay zava-nitranga nandritra ny resadresaka nifanaovany tamin'i Maisfutrbol, hoy izy taloha;
"Tsy nampihemotra ahy ny ady, toe-javatra mahazatra amin'ny fampiofanana. Nanohana ny ekipa sy ny namako aho. Tonga aho ary iray amin'ireo mpilalao manan-danja indrindra tao amin'ny ekipa dia niady tamin'ny ahy. Nanelingelina ahy izany tamin'izany fotoana izany saingy tsapako fa tao anatin'ny fotoana sarotra i Neymar tamin'io fotoana io. Fotoana naniry ny handao ilay klioba izy io. "
Semedo no mitana ny laharana 50 ao Benfica, maromaro izay tsy azo atao ao La Liga, izay mamela ny mpilalao voalohany handray ny laharana 1-25.
Ny tarehimarika nomena an'i Nelson Semedo (Sary nahazoan-daza amin'ny mpividy Barcelona ao Barcelona sy BestWay4You)
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Nelson Semedo momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.